Fampirantiana ny fitaovana-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Projet Logistics>Ny lozisialy fampirantiana
Ny sohologiste dia tena manam-pahaizana manokana momba ny fampiratiana. Izahay dia mikarakara ny fitaterana fampirantiana sy fampitaovana manerana izao tontolo izao ho an'ny fampirantiana, fampirantiana zava-kanto, hetsika ary varotra.
Miaraka amin'ny fikarohana fivoarana sy fampivoarana maherin'ny 20 taona, masoivoho kalitao avo lenta manodidina ny firenena maherin'ny 200 eran'izao tontolo izao, Sohologistic dia mahazo lozisialy fampirantiana matihanina ary traikefa eo amin'ny sehatry ny serivisy fitaterana ary fiaraha-miasa akaiky amin'ireo orinasa fampirantiana manerantany sy mpiara-miasa hafa. manome ny orinasa manafatra sy manondrana, ary mpanao fampirantiana miaraka amina fonosana matihanina, fanamboarana entana ary fitaterana serivisy mifandraika amin'ny seho
Izahay dia manala ny fitateram-pitaterana fampirantiana, antontan-taratasy ATA, fombafomba ao amin'ny fadin-tseranana, fandinihana ny fahafahana mamela anao malalaka hifantoka amin'ny lafin-javatra manan-danja amin'ny hetsika ataonao.
Serivisy logiciel fampiratiana Sohologistic
Raha fintina ny zavatra ataontsika amin'ny fampirantiana dia manome:
Fomba tsotra sy tsotra handaminana ny trano heva
Fametrahana sy fanafoanana
Serivisy fandikana an-toerana
Fanaterana ara-potoana ho an'ny Exportits Exportits
Fanaterana ara-potoana ho an'ny Exhibits Import
Fitaterana lozika ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena
Fitaterana lozika ho an'ny Siansa
Fitaterana lozisialy ho an'ny Seho
Toetoetran'ny lojika fampirantiana
1. Noho ny fahatongavan'ny toerana fanatanjahantena sy ny efitrano fampirantiana, ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana ary ireo antony hafa, zava-dehibe ny fandefasana ara-potoana, izay midika fa tsy ho tonga mialoha na tara ny entana.
Ny fifehezana ara-potoana ho an'ny rohy tsirairay ary koa ho an'ny politika sy ny fepetra takian'ny fiteny eo an-toerana.
2. Ilaina mafy amin'ny tahiry manafatra sy manondrana. Ho an'ny lojika fampirantiana, amin'ny ankapobeny dia manaiky ny fanambarana fanondranana sy ny fanondranana entana vetivety ary ny fanambaràn'ny antontaly ATA.
3. Ilaina mafy amin'ny fonosana entana. Sarety baomba maro no tokony ampiasaina mba hiantohana ny fitomboan'ny baoritra, porofo hamandoana ary tsy fahita anaty rano ary mora levona.
4. Ireo fitaovana fanaovana dokambarotra sy fitaovana ara-teknika ampiasain'ny mpanao fampirantiana dia tsy maintsy iharan'ny fisafoana, fisoratana anarana ary fahazoan-dàlana ataon'ny Customs Shinoa.
5. Ireo fepetra takian'ny fampirantiana sy marika vita amin'ny fonosana fampisehoana dia takiana miaraka amin'ireo fampahalalana manaraka ireto:: anarana fampirantiana, anarana fampirantiana, isa fampirantiana, laharana fonosana sy isa iray manontolo.
Ny fizotran'ny fampirantiana lozika fampirantiana
1. Fanasoniavana ny fifanarahana fitaterana
2. Manao ny drafitry ny fitaterana
3. Fanodinana sy fonosana
4. Fanadihadiana ATA
5. Mametraka ekipa tetikasa
6. Fanatanterahana ny drafitry ny fitaterana
7. Fanehoan-kevitra hita maso
8. Ny serasera sy ny fandrindrana eny an-toerana